Upgrading gị ama na-arị elu ekwentị-agbụ n'ọkwá bụ ihe niile banyere ọnụma n'oge. Mgbe ị na-eji na ekwentị gị n'ihi na a mgbe, gị niile dị oké ọnụ ahịa data Nwela chịkọbara na ya na ebe nchekwa na-eme ka ọ a mebere data akụ igbe. The isi ịma aka nke dawns n'elu gị mgbe ị na-ekpebi ka ịgbanwee gaa na a dị iche iche ekwentị bụ, otú e si lee na akụ na gị si gị ochie smartphone ndị ọhụrụ otu.
The streamlined Windows ekwentị na-agba ọsọ Windows 8 sistemụ na-abịa na nke kacha mma-na-achọ handsets na ekwe atụmatụ. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ka ịgbanwee n'elu si gị ochie Blackberry smartphone ọhụrụ onwunwu Windows ekwentị, ị na-eme mkpebi amamihe. Otú ọ dị, dị ka e kwuru n'elu, na isi nke na i nwere ike na-eche ihu mgbe na-eme bụ mkpebi gị banyere ebufe data gị Blackberry ndị ọhụrụ Windows 8 ekwentị. Isiokwu a aims ehichapụkwa na ajirija si gị brow site n'inye gị a nkọwa zuru ezu na otú agafeta data, na na kwa maka free.
Nyere N'okpuru ebe a bụ ole na ole-atụ aro na-eru nso na ị pụrụ ịgbaso-gi data gị Blackberry ka Windows ekwentị:
• Iji nyefe My Data App
Fọrọ nke nta niile Windows smartphones nwere wuru na-ngwa aha ya bụ 'Nyefee My Data'. Ọ bụrụ na gị ekwentị adịghị ngwa, ị nwere ike ibudata ya na Windows Echekwala maka free. The ngwa na-eme ka njem ndị na-ebufe kọntaktị na ozi ederede ngwa ngwa na hassle-free. Na 'Nyefee My Data' ị nwere ike mfe nyefee data si gị ochie Blackberry smartphone gị Windows ekwentị n'iji Bluetooth. Ndị kasị emelitere version nke ngwa-enye gị ohere idetuo kọntaktị, na-agbakwụnye na wider nkwado maka nyefe nke ozi ederede. Ọzọkwa, a version na-akwado ndị Iṅomi nke music faịlụ site na họrọ Symbian na Series 40 Nokia ngwaọrụ.
Ịkwaga gị data site na iji Nyefee My Data ngwa:
1. Mee ọ rụọ ọrụ Bluetooth na ma ndị smartphones.
2. On gị Windows ekwentị, ẹkedori Nyefee My Data si ngwa ngalaba na n'ụlọ ihuenyo.
3. Ozugbo ngwa window emepe, enweta Gaa n'ihu bọtịnụ.
4. Site dịnụ Bluetooth ngwaọrụ, pịa iji họrọ akara na-anọchite gị Blackberry ekwentị.
5. Na ọzọ window, ego na checkboxes na-anọchi anya data na ị chọrọ nyefee.
6. Ozugbo họrọ, enweta Malite bọtịnụ na ala-akaekpe.
7. Chere rue data faịlụ na-depụtaghachiri si gị Blackberry ngwaọrụ gị Windows ekwentị tupu ị malite iji gị ọhụrụ ekwentị kwesịrị.
Rịba ama: Ị nwere ike ịkwụsịtụ transfer usoro ọ bụla oge site na ịme ọpịpị na Kwụsị bọtịnụ na Ọganihu window.
Dị nnọọ ka ọ bụla ọzọ dị otú ahụ ngwaahịa ma ọ bụ ngwa nwere ya uru na drawbacks, Nyefee My Data na-abịa na nke ya tent nke uru na ọghọm.
1. Nke a ngwa-azọpụta gị si hassle nke aka-ebufe na kọntaktị na ozi ederede na-eme ka ndị dum usoro ngwa.
2. Ịnwere ike ịnyefe na kọntaktị na otu-click.
3. The ngwa-abịa dị ka a wuru na-omume na ọtụtụ Windows ntị, ya mere na ọ dịghị ọzọ-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ a chọrọ iji ike ibudata.
1. Ọbụna ọhụrụ version enye mmachi nhọrọ maka ụdị data na i nwere ike nyefee.
2. The nkwado maka ebufe music faịlụ na ozi ederede bụ maka ole na ole nke ngwaọrụ.
3. The transfer usoro nwere na-otutu ego nke oge ịrụcha.
• site syncing Your Windows ekwentị na Windows / Mac
Ime ka ọtụtụ nke gị Windows ekwentị na iji hụ na ọ dịghị nke gị mkpa data echekwara na gị Blackberry ngwaọrụ a hapụrụ, ọ na-akwụ jikọọ na mmekọrịta ya na gị na PC. The free Windows Phone ngwa n'ihi na PC-eme ka ọ nwatakịrị play n'ihi na ị nyefee gị data si gị ochie ekwentị dị ka Blackberry gị Windows ekwentị.
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ a Mac PC kama Windows dabeere kọmputa, ị nwere ike iji Windows Phone ngwa n'ihi na Mac ngwa Nke ahụ bụ kpọmkwem mepụtara maka Mac ọrụ.
Ị nwere ike ibudata kwesịrị ekwesị ngwa maka ngwaọrụ gị si nyere njikọ:
Iji malite iji Windows Phone ngwa n'ihi na Windows / Mac agafeta data gị Blackberry ka Windows ekwentị, soro ntuziaka nyere n'okpuru:
Nzọụkwụ 01: Nyefee data gị Blackberry smartphone:
Agafeta data gị Blackberry ekwentị gị Windows / Mac:
1. Jikọọ gị Blackberry ekwentị gị Windows / Mac na eriri USB.
2. Ozugbo ejikọrọ, abụọ-pịa Computer ngosi site na desktọọpụ ihuenyo.
(Windows 7 mee ihe n'ebe a. Ọ bụrụ na ị na-eji Windows 8 ma ọ bụ n'elu sistemụ, ị ga-eso mkpa usoro imeghe Computer window.)
3. Site meghere window, abụọ pịa akara na-egosipụta gị Blackberry ekwentị.
Rịba ama: N'ihi na Mac ọrụ, mpụga ekwentị jikọọ gị na kọmputa na-egosipụta dị ka iche iche nchekwa na desktọọpụ onwe ya.
4. Ozugbo gị Blackberry si window emepe, họrọ faịlụ na ị chọrọ nyefee gị Windows ekwentị.
5. Mgbe faịlụ e họrọ, nri-pịa ọ bụla nke ahọrọ faịlụ.
6. Site egosipụta onodu menu, pịa Copy nhọrọ.
7. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, iwelata meghere window, na azụ na desktọọpụ ihuenyo, nri-pịa bụla na ide ebe.
8. site na onodu menu, pịa Paste nhọrọ oge a.
9. Ozugbo faịlụ na-depụtaghachiri, Ikwupu gị Blackberry ngwaọrụ site na Windows / Mac.
Nzọụkwụ 02: Nyefee data gị Windows / Mac gị Windows ekwentị.
1. Download ziri ezi version nke Windows Phone ngwa gị Windows / Mac site na njikọ ndị nyere n'elu.
2. Jikọọ gị Windows ekwentị na ngwaọrụ gị na eriri USB.
Rịba ama: Jide n'aka na ihuenyo nke ekwentị gị unlocked mgbe ị jikọọ ya na gị na PC.
3. Chere rue smartphone Nwela ejikọrọ na ebudatara ngwa ebupụta.
4. Ozugbo nke a mere, si n'elu-nri akuku nke window, pịa Add button (na ihe ngosi e sere dị ka 'gbakwunyere' ihe ịrịba ama).
5. Site dịnụ nhọrọ na meghere igbe, nri-pịa faịlụ (s) / nchekwa (s) na ị chọrọ nyefee ekwentị gị.
6. Họrọ Tinye site na onodu menu.
7. Chere rue faịlụ ndị ahọrọ na-agafere gị Windows ekwentị tupu ị malite na iji smartphone kwesịrị.
Nke a bụ a dị ọcha na streamlined usoro agafeta data ọ bụla na smartphone (Blackberry dị ka ihe atụ ebe a) gị Windows ekwentị. Ngwa-abịa na ma uru na ọghọm.
1. The ngwa nwere ike ibudata na gị Windows / Mac for free.
2. Windows ekwentị ngwa na-enyere gị nyefee faịlụ site na ma gị mpụga ngwaọrụ na gị Windows / Mac.
3. I nwere ike nyefee faịlụ site na gị Windows ekwentị gị PC.
4. Nke a na usoro-enyere gị aka ịmepụta ndabere oyiri nke data echekwara na gị Blackberry smartphone.
5. The ọcha na mfe na-eji interface-enye gị ohere a hassle-free ụzọ nke na-ebufe gị faịlụ.
1. Ị ga-download a-atọ ndị ọzọ ngwa aha ya bụ Windows ekwentị ngwa nyefee gị faịlụ.
2. Ị na-achọrọ-anata tedious usoro nke mbụ na-ebufe faịlụ gị PC, na mgbe ahụ na-akpụ akpụ na ekwentị gị.
> Resource> Nyefee> Olee ka ịgbanwee Data si Blackberry ka Windows Phone